A1nepal.comनेपाली बैज्ञानिक उत्तम बाबु श्रेष्ठको बुवाको निधन, आफ्नो बुवालाई यसरी सम्झिय - A1nepal.com
नेपाली बैज्ञानिक उत्तम बाबु श्रेष्ठको बुवाको निधन, आफ्नो बुवालाई यसरी सम्झिय
२०७६ आश्विन ११, मा प्रकाशित
फोटो: उत्तम बाबु श्रेष्ठको फेसबुक पेज
अलविदा बाबा !
बाबालाई बचाउन सकिएन । आज बाबा बित्नुभयो । मेरा बाबा कुनै नाम चलेको कलाकार, साहित्यकार, लेखक, राजनितिज्ञ, स्कलर वा चर्चित व्यक्ति हुनुहुन्थेन् । एक सामान्य र आमआदमी हुनुहुन्थ्यो । उहाँले समाजको लागि खासै ठूलो योगदान पनि दिनु भएन । मलाई थाह भए अनुसार, उहाँले टोलमा आफ्नै खर्चमा एउटा मन्दिर निमार्ण गर्ने र आफू अगुवा भएर घरै अगाडीको बाटोको स्तरोन्नति गर्ने बाहेक ठूला सामाजिक काम गरेको जस्तो पनि लाग्दैन् । हुन त आजको दिनमा समाजसेवी भनेर पगरि गुथ्ने, दिनरात समाजसेवाको लागि दैडिने, खादा र मालाले एकदिन पनि नछोड्नेहरुले समाजको लागि के गरे ? भन्दा उनीहरुले गरेका ठोस कामको सुची मेरा बाबाको जति पनि भेट्न मुस्किल पर्छ तर बाबाले ती दुई काम गरेर छाड्नु भयो । गोरखाको सभंवत सवैभन्दा महंगो जग्गाहरुमा पर्ने ठाँउमा बनाइएको त्यो सानो मन्दिर नबनेको वा नवनाइएको भए सायद त्यो ठाँउ उहिल्यै अतिक्रमणको सिकार भइसक्थ्यो वा फोहर फाल्ने ठाँउमा परिणत हुन्थ्यो । तर बालुवाटार लगायतका देशभरिका सार्वजनिक जग्गा लुटिइरहेको वर्तमान अवस्थामा उहाँले घर छेवैको सानो सार्वजनिक जग्गालाई आफ्नो वलवुताले पुजनियस्थलको रुपमा रुपान्तरण गरिदिनु भयो ।
अष्ट्रेलियाबाट बाबा विरामी भएको खबर पाएर हतासिदैं आएको ६ हप्ताको समय मनौवैज्ञानिक र भौतिकरुपमा जीन्दगीको सबैभन्दा कष्टप्रद रह्यो । कहिले राम्रो कहिले नराम्रो, कहिले हाँसो, कहिले रोदन । कहिले हाई कहिले लो । पुरै रोलरकोष्टर । तर पनि मलाई लाग्छ, यो समय मेरो जीन्दगीको सबैभन्दा खुशीको समय हो । खुशी भनेको ओठमा मुस्कान वा हाँसो ल्याउनु होइन । आफ्नो अवस्थाप्रतिको सन्तुष्टी हो खुशी । मार्क ट्वेनले भनेका छन् अबको वीस बर्षपछि हामी आफूले हासिल गरेका चिजमा खुशी हुने भन्दा नगरेका चिजमा बढि पछुताउँछौं ।
यो छ हप्तामा देशको विभिन्न अस्पतालहरुमा चाहर्दै लगभग हरेक दिनजस्तो अस्पतालका कोठाहरुमा उहाँसँग कुरुवा बस्न पाँए । आफ्ना तमाम पेशागत दैन्दिनी कामहरु, विदेश यात्राहरुलाई थाँती राखेर । मैले पाए जस्तो अवसर आजको दिनमा नेपालमा म जस्तो परदेशीएको कमै छोराछोरीहरुले पाउँछन् । म जस्तै परदेशीएका नेपाली छोराछोरीहरुले आमाबाबाहरुको अप्ठ्यारो अवस्थामा उनीहरुलाई भेट्ने, सँगै बसेर दुखको भागेदार वा सहयोगी बन्ने भन्दा पनि उनीहरुको देहवसान भएपछि कर्मकान्डको लागि झुल्किन पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ यतिखेर । मेरो पनि त्यस्तै हुनसक्थ्यो तर भएन । त्यस अर्थमा म आफूलाई निकै भाग्यमानी ठान्दछु । हरेक बाबाहरुले आफ्ना छोराछोरीलाई मेरो बाबाले मेरा लागि गरे जस्तै धेरै कुराहरु गर्छन् । तर थप जाँदाजाँदै पनि बाबाले मलाई छोरोेको कर्तव्य निर्वाह गर्ने अवसर दिएर मार्क ट्वेनले भनेजस्तै भविष्यमा मलाई पछुताउने ठाँउ पनि दिनु भएन ।
बाबाआमाको एक्लो सन्तान म । गाँउमा एसएलसी दिएपछि नै बाबाको सपना वा चाहना थियो । छोराले अमेरिकाबाट पढ्नुपर्छ । उहाँ भन्ने गर्नु हुन्थ्यो, अमेरिकाको पढाईलाई विश्वले मान्यता दिन्छ, संसारभर विक्न सकिन्छ । आइएस्सी पढ्दाताका बाबाले के भन्नु भएको होला ? हामी जस्ताले कसरी पढ्ने अमेरिका जस्तो लाग्थ्यो । सौभाग्यवश मेरो मेहनतले, उहाँहरुको सहयोग र हौसलाले मैले अमेरिकामा नै पढ्न पाँए । घरमा छोरी बनेर आएकी मेरो श्रीमती (उनी पनि एक्ली सन्तान हुन्) ले पनि अमेरिकामा नै पढ्न् ि। दुवैले त्यहाँबाट पिएचडी सकायौं । अष्ट्रेलियामा काम पाइयो । कामको सिलसिलामा हुने मेरो संसारभरका यात्राहरु देखेर बाबालाई लाग्थ्यो, छोरो अब संसारका विभिन्न ठाँउमा विक्ने भयो ।
बाबाको अर्को चाहना पनि थियो । पढाई सकिएपछि छोरा विदेश बसिरहनु हुन्न, नेपाल फर्कनु पर्दछ । पछिल्लो समयमा त्यो चाहना ढिपीमा परिणत भएको थियो । सुजाताले र मैले त्यो चाहनामा पुरा गर्ने निश्चित गरेका थियौं । हामी सन् २०२० को शुरुवातमा सधैंको लागि नेपाल फर्कने निर्णय गरेर त्यहि अनुसारका चाँजोपाँजो मिलाउदै थियौं । विदेश बसेका बच्चाहरु नेपालको अस्तव्यस्तता देखेर डराउँछन् । सात वर्षिय मेरो छोरी पनि अपवाद थिइनन् । बाबा अस्पतालमा हुँदा नै बाजेको चाहना अनुसार नै उनले नेपालका स्कूलहरु भ्रमण गरिन् । यहाँका कतिपय स्कूलहरु भौतिक रुपमा उनले अमेरिका, अष्ट्रेलियामा पढेका स्कूलहरु भन्दा पनि भव्य थिए । त्यो देखेर छोरी दंग थिइन् । यो सबै देखेर बाबा निश्चित हुनुहुन्थ्यो, अब केटाकेटी नेपाल फर्कछन् ।
मलाई पनि यो समयमा बाबासँग अस्पतालहरु हिड्दा त्यहाँ भेटेका थुपैै्र बाबाआमाहरु जसका सन्तानहरु विदेशमा छन् उनीहरुको कुरा सुन्दा आफ्नो नेपाल फर्कने निर्णय एकदमै सहि गरेछु भन्ने ढृढनिश्चित भएको थिए । बाबाआमाहरुले फोनमा स्काइपमा यहाँबाट ठीकै छु भनेपनि छोराछोरीको अनुपस्थितिमा धेरै बाबाआमाको अवस्था ठीक रहेनछ । वर्तमान नेपालमा मेरा बाबाआमा जस्तै धेरैको बाबाआमाहरुले आफूभित्र ठूलो पिडा लुकाएर बाँचेका रहेछन् । एकजना बुबा जसको छोरा अक्फोर्ड विश्वविद्यालय पढेर विदेशको प्रतिष्ठित संस्थामा काम गर्ने रहेछन् । उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, बाबु कहिलेकांहि त भाउन्न हुन्छ, पाउने भए लिट्टे (तामील टाइगर) ले घाँटीमा झुन्डाउने जस्तै पोटासियम साइनाइट झुन्डउँथे । सकुन्जेल यसरी अस्पताल आयो अनि नसकेपछि त्यसलाई टोक्यो अनि सुइकियो । उहाँको कुरा सुनेर म स्तब्ध भए । यो हदको वेचैनि र उकुसमुकुस रहेछ बाबाआमाहरुमा ।
मेले अहिलेसम्म सूर्यवहादुर थापा, गिरीजाप्रसाद कोइराला र शुशिल कोइरालाको अविच्यूरी लेखेको छु । अघि नै लेखे, मेरो बाबा कुनै त्यस्ता ठूला मान्छे हुनुहुन्थेन् । त्यसैले मलाई थाह छैन् मेरा बाबाका लागि यी शब्दहरु मेलै लेख्न हुन्छ कि हुँदैन् । तर आज नेपालका उच्च पदस्थहरु वा ठूला भनिने मान्छेहरु जसले नेपालमा राजनितिदेखि प्रशासन र समाजसेवाका उद्योग चलाइरहेकाछन् । उनीहरु सकेसम्म आफ्ना छोराछोरी विदेशमै बसोस् र नेपालमा आफ्नो उद्योग नचलेपछि बुढेसकालमा आफूपनि विदेश गएर सेटल्ड हुने चाहना र व्यवहार गर्छन् । ती मध्ये कतिले यहाँ कमाएको पनि विदेश लगेका छन् । त्यस कशिमा हेर्दा मेरो बाबा ठूलो मान्छे नभएतापनि उहाँको सोच ठूलो रहेछ जस्तो लाग्छ । सन्तानले विदेश पढोस्, देखोस्, ज्ञान, अनुभव हासिल गरोस्, संसार मै विक्ने पनि बनोस् । तर काम र पौरख स्वदेशमा नै आएर गरोस् । मेरा बाबाले उहाँले यस्तो सोच मात्रै राख्नु भएन । मेरो लागि सम्पूर्ण परिस्थिति निर्माणको लागि सहयोग गरिदिनु भयो । यू आर ग्रेट बाबा ।
बाबा अलि ढिपी हुनुहुन्थ्यो । आफ्नो कुरामा अडिग । म उहाँको कुरा काट्न नसक्ने । डाक्टर र नर्सले समेत जिस्किएर उहाँलाई बाबा, गोरखाको पानी कति कडा हो भन्थ्ये । अस्ति अस्पतालमा उहाँको स साना जिद्दी देखेर दिक्क हुँदै मैले भनेको थिए, बाबा अब तपाई जे भन्नुस् भन्नुस्, तपाईको यस्ता कुरा मान्दै मान्दिन् । हरे ! कस्तो शब्द मुखबाट निकालेछु । बाबा सधैंको लागि निशब्द हुनु भयो । अलविदा बाबा
यस अप्ठ्यारो परिस्थितिमा गुज्रदा मलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गर्ने डाक्टर, नर्स, सहयोगीहरु, मेरा परिवारजन, आफन्त, साथीभाई इष्टमित्र सबैप्रति आभारी छु । तपाईहरुको भलो होस् ।
ए१ नेपाल परिवार सम्पूर्ण श्रेष्ठ परिवार प्रति हार्दिक समबेदना र मृतक प्रति श्रद्दान्जली ब्यक्त गर्दछौ.